Ọkachamara Semalt: Ihe niile I Kwesịrị Ịma Banyere Ntụle
Ivan Konovalov, Semalt Onye Ahịa Nlekọta Ndị Na - arụ Ọrụ, kwuru na ị ga - eji ihe nzacha maka imezi ma kpachibido data ahụ anya. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-ekwe omume iji nzacha maka ịhapụ okporo ụzọ si n'otu adreesị IP. Ị nwere ike ịgụnye data site na subdomains chọrọ na ndekọ aha na ị nwere ike ịgbanwere ibe di iche iche na ederede na ederede. Ị ga-achọ ikikere na ọkwa akaụntụ tupu ịhazi nzacha.
N'akụkụ a, ị ga-edozi ihe ntanetị mbụ mgbe ị na-ele vidio ahụ, nke bụ akụkụ nke usoro nchịkọta Digital Analytics. E webatara ya na Ụlọ Akwụkwọ Nchịkọta. Njikọ vidiyo bụ ebe a: analyticsacademy.withgoogle.com.
A ga-ewepụ ihe nzacha nrụpụta site na data Google Analytics gị. Maka nke a, ị ga-eji ihe nzacha iji wepu ma ọ bụ tinye okporo ụzọ site na ngalaba, dị ka netwọk ụlọ ọrụ ma ọ bụ ISP. Mgbe ị kwupụtara aha ngalaba ahụ, ị ​​gaghị agụnye akara ederede nnabata ya n'enweghị ikike.
Ihe ọzọ ị ga-eburu n'uche bụ ịhapụ naanị okporo ụzọ site na adreesị IP ndị a..Ntucha a nwere ike iji wepu ma ọ bụ gụnye clicks site na otu adreesị IP ma ọ bụ otu isi iyi. Ịzacha ọtụtụ adreesị IP na nhọrọ a ga-ekwe omume. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịsekwu ọkwa nke adreesị, ị ga-eji Nhọrọ nhazi Nhọrọ maka iwepu ya. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike iji adreesị IP maka ịkọwa okwu mgbe niile dị ka Ụdị nyocha.
Ewepu: O nwere ike iwepu akara faịlụ ndị kwekọrọ na Ụkpụrụ nyocha gị. I kwesiri ileghara uzo ndi ozo anya iji jide n'aka na nchekwa nke ebe gi na intanet.
Gụnye: Ọ na-agụnye akara faịlụ ndị ga-adaba na Ụkpụrụ nyocha gị. A ghaghị ileghara hits ọ bụla na-ekwesịghị nhata, na data ndị ahụ na-enweghị ntụkwasị obi na akụkọ Google Analytics gị.
Lowercase na Uppercase: Ọ ga-ekwe omume ịmegharị ọdịnaya nke ubi n'ime obere ma ọ bụ nnukwu, dabere na ihe ị chọrọ.
Chọọ ma Dochie: Ọ bụ nhazi ziri ezi na nke kachasị mma nke a pụrụ iji maka ụdị ịchọpụta n'ime ubi. Ọ na-enye aka dochie ihe eji eme ihe na ihe ndị ọzọ kwesịrị ekwesị.
Di elu: Ọ na - ahapụ gị ka ị rụọ ubi site na isi ruo ebe ọzọ. Ngwá nyocha ahụ ga-etinye okwu niile dị na nchịkọta abụọ. Mgbe ahụ, ọ na-eji mpaghara enyemaka nke Constructor kọwaa mpaghara ọzọ.
Na-eji maka nzacha:
N'ebe a, anyị akọwala ụfọdụ ojiji nke nzacha:
Ewezuga okporo ụzọ site na akụkọ ndị a: A ga-eji nzacha mee ka ịwepụ okporo ụzọ n'ime nchịkọta akụkọ Google Analytics gị. Maka nke a, ị ga-edozi ihe nzacha ahụ nke na - akọwa adreesị IP ịchọrọ igbochi.
Kọsaa ọrụ ndị a na ndekọ aha kpọmkwem: Ọ bụrụ na ị na-achọ ịkọ ọrụ n'ime ụfọdụ akwụkwọ ndekọ aha kpọmkwem, ị ga-edozi nchịkọta nke nwere ike ịmata ndekọ aha ndị ahụ.
Sochie subdomains na iche iche echiche: Ọ bụrụ na ịchọrọ soro subdomains, ị kwesịrị ịmepụta echiche dị iche maka ngalaba na subdomain. I kwesịkwara ịgụnye ndị nzacha iji chọpụta ntinye aha ndị ahụ Source .